Fitaovana famoahana entona gazy metana laser - Mpanamboatra mpamantatra gazy methane laser, mpamokatra
1.OverviewNy detecteur momba ny famoahana gas methane lavitra an-tanana dia mampiasa teknolojia laser spektroskopi (TDLAS) azo tsapain-tanana mba hahitana haingana ny famoahana entona ao anatin'ny 30 metatra. Ny mpiasa dia afaka mamantatra amin'ny fomba mahomby ireo faritra sarotra tratrarina na tsy azo tratrarina aza amin'ny faritra azo antoka, toy ny lalana be olona, ​​ny fantsom-piato mihantona, ny fiakarana avo lenta, ny fantsom-pifandraisana lavitra ary ny efitrano tsy misy olona. Ny fampiasana dia tsy fanatsarana tsara ny fahombiazana sy ny kalitaon'ny fizahana an-tongotra, fa koa ahafahako m ...
JJB30-2new type Detector resaky ny famoahana entona metana lavitra
1.OverviewNy detecteur momba ny famoahana gas methane lavitra an-tanana dia mampiasa teknolojia laser spektroskopi (TDLAS) azo tsapain-tanana mba hahitana haingana ny famoahana entona ao anatin'ny 30 metatra. Ny mpiasa dia afaka mamantatra amin'ny fomba mahomby ireo faritra sarotra tratrarina na tsy azo tratrarina aza amin'ny faritra azo antoka, toy ny lalana be olona, ​​ny fantsom-piato mihantona, ny fiakarana avo lenta, ny fantsom-pifandraisana lavitra ary ny efitrano tsy misy olona. Ny fampiasana dia tsy fanatsarana ny fahombiazana sy ny kalitaon'ny fizahana an-tongotra fotsiny, fa koa ahafahan'ny ...
1.Overview Laser-methane remote metany remote detector detector dia teknolojia avo lenta izay mahatsikaritra ny fivoahan'ny metana amin'ny halavirana lavitra. Izy io dia taranaka vaovao misy vokatra mamantatra ny famoahana, izay manatsara be ny fahombiazana sy ny fiarovana ny fizahana an-tongotra, ilay fitaovana misy, eken'ny besinimaro. Mampiasa spectroscopy tamin'ny laser azo zahana (TDLS) izy io mba hahitana haingana ny fivoahan'ny entona hatramin'ny 30 metatra.Hitan'ny olona tsara ny faritra sarotra azo na tsy azo idirana ao anatin'ny faritra azo antoka, ...